10 Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/02/2021)
the ukufudumala ayikho phezu kodwa. Kusekho ixesha isizathu ukutyelela uMzantsi Italy kule nyanga! EMazantsi e-Italiya kukho iminikelo emangalisayo. Le Indawo Best kutyelela eMzantsi Italy zibandakanya; kwimigama ezintle ezikunxweme olukhulu, ngeso esimhlophe eziphelele, iziqithi ezinomtsalane zonxweme, kunye nentaphane yezixeko needolophu. Kwakunzima ukuba ungaxinanisa phantsi nje kuluhlu lwethu 10, kodwa nantsi i- 10 ezindaweni kutyelela eMzantsi Italy.
1. I Truck Coast
Yintoni na uhambo oluya Italy ngaphandle ukuhambela Truck Coast? Lo mmandla ethile Southern Italy yenye yezona amahle ezaziwa emhlabeni! Ukususela Naples ukuya Salerno, i Truck unikeza unxweme dramatic scenery, emizini langa ukuthi ukwanga ezintabeni, yaye ezinye iisayithi umdla zembali.
Le ndawo ekhuselweyo iimpawu ezithile kwiidolophu eziselunxwemeni yokuchitha ezifana Truck, Erchie, Abancinci, kunye nePositano - ezi dolophu zinothotho lwezindlu ezinemibala eyahlukeneyo ezixinana ngokuchasene ne amawa kunye nokubonelela ngamathuba emifanekiso-egqibeleleyo.
Ngaphezu, sites ezifana Villa Rufolo e Ravello zinika imibono nanto ngaphesheya koLwandle iMeditera.
Sorrento uye zombini aluncedo ukuba abakhenkethi bafumana yintuthuzelo kwakunye zakudala ezizodwa kunye nesiphelo eliphezulu-ezithengiswayo kwidolophu endala. Iphenyane ushiya ukusuka apha ukuya onxweme Capri, kwaye lamba enkulu off point for ePompeii. kunjalo, ISorrento yaziwa ngokuba yiyo gourmet Cuisine kakhulu, zokuhlala eweni emangalisa (Nakuba kungekho amalwandle), kunye nemibono mihle iNtaba iVesuvius.
Bologna, ku Pompei Uqeqesha
Le dolophu medieval ukuba ibekwe ecaleni ngaselunxwemeni enamatye yoLwandle iMeditera. izibuko layo ritzy yenye iindawo eziphezulu Italy. Ukuba ufuna ukuhlala apha ehlobo kusenokufuneka ukubhukisha kakuhle kwangaphambili ukuze kukhuselwe hotel lwakho olukhethelwe njengoko amagumbi obu AMANYE. Njengokuba sisondele ekupheleni ixesha efudumeleyo, nibe luck ethile kunye ukubhukisha-ngomzuzu wokugqibela!
Abanye imbali cool, Paestum yidolophu umhlaba Italian, kodwa yasekwa amaGrike amandulo xa onolawulo kule nxalenye Italy! Emva koko ke yaziwa ngokuba Poseidonia emva uthixo yolwandle.
Nakubugcisa Greek kuphela ulingana utyelelo ngoko qiniseka ukuba oko kwi uhambo lwakho ngaphandle kokutyelela iitempile Greek ugcinwe kakuhle ezintathu kufuneka ubone. Omdala yakhiwa malunga 550BC (ukunika okanye uthathe unyaka) kwaye indlu ka zekhompyutha into emangalisayo.
5. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: Naples
Naples, okanye Napoli, kuxhomekeke koko ulwimi, sisixeko lesithathu ngobukhulu Italy. Ukunyaniseka, kukho ezinye izimvo ephikisayo kakhulu kule nxalenye yoMzantsi Italy. Kweminye, likhulu kakhulu, ezingcolileyo, Ulwaphulo-mthetho, nokuwa, kwabanye oko kwiTV na esesibhakabhakeni. Enoba moya iinwele wakho, thina ndiyaqikelela? One thing is for sure though. Esi sixeko wonxweme Southern ubuntu yayo!
abaninzi ukudla ekuthanda Italian zazivela Naples ezingqongileyo yayo iindawo ezifana pizza, kunye ungumcu. Ezi izitya zithathwa kakhulu apha kwaye ngokuqhelekileyo lungafaka fresh, izithako ekhuliswa ekuhlaleni. Utsalo lwezotyelelo e Naples ziquka i enkulu inqaba ephakathi, New Castle, kwakunye nolwandle inqaba Castel del Ovo. Esi sixeko sisecaleni kweVesuvius, lo mlilo kuphela asebenzayo kwilizwekazi laseYurophu.
6. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: Alberobello
Idolophu Alberobello ukhetheke ukuba umzekelo obalaseleyo abalondolozwa Trulli lwezakhiwo ukuba kufunyanwa kuzo zonke Italy (kuhle, ngoko ndaxelelwa).
Imizi kule isimbo Trulli zenziwa kunye nophahla ngamatye etsobhileyo ngaphandle esebenzisa udaka (nakuba, Mna akukho umakhi ngoko azicaphule me ngaloo). Imizi ezindala kuthi ga ngoku ukususela ngenkulungwane ye-14 kwaye emangalisa ngokupheleleyo, ukuyenza ibe yeyenye yezinto ekufuneka ubonile kwaye imizi amahle e Italy Southern ukutyelela.
Naples ku Monopoli Uqeqesha
7. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: Tropea
Khangela, Ndiya isilumkiso kwangaphambili. Amathuba photo kule ndawo are ngamageza. Lumkani ukuba ungaphoswa phezu into yokwenene! the idolophu entle yakudala I-Tropea ithe ngcu phezu kwamawa athe saa ngaphaya kwendlela ukusuka a beach emxinwa sandy, kuthiwa ukuba ibisekwe yi uMofokeng ngokwakhe.
Ukuba indawo ukhamba, kukho ezimbini amabandla gorgeous e Tropea kakhulu, i Santa Maria del Isola i icawa aphakathi eyakhiwe kwisiqithi nangona iminyaka kwentlenge kubangele ibhulorho umhlaba wabumba phakathi siqithi kunye nemisinga. Eyesibini i yecawa; liye Ziyaqhubeka ezimbini unexploded ezisukela WW2 ehleli nje engaphandle emnyango ibandla. Basekuhlaleni bakholwa esi sakhiwo mazikhuselwe saint umxhasi ukuze ukubukela inyathelo yakho!
Iicawa kuphela ukwenza oku yenye yeedolophu intle in Southern Italy. Uya ziyathanda!
Vibo Marina ku Tropea Uqeqesha
Catanzaro ku Tropea Uqeqesha
Cosenza ku Tropea Uqeqesha
Lamezia Terme ku Tropea Uqeqesha
8. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: CAPRI
Nngokobuchwepheshe kwisiqithi esincinane, CAPRI idolophu langa kunye marina ukuba kufuneka uhlole. lonke siqithi esisityebi kwimbali kunye neentsomi omnye ndawo enhle kufuneka kutyelela xa kummandla.
Ukuba ukhangela izinto ukubona, Ikhaya loMlawuli waseRoma uTibheriyo (Villa Jovis) isekhona enye amabala ezinkulu ukulibona kwi siqithi kunjalo Blue GROTTO. Emqolombeni chibi kuphela lula ngesikhephe kwaye kuphela xa kukhona tide kakuhle (ukuze kulungiselelwe barhoxa).
9. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: IPompeii neHerculaneum
yasePompeii neHerculaneum iidolophu ezimbini baseRoma kunye nemizana zatshatyalaliswa xa iNtaba iVesuvius kwaqhambuka yonke indlela emva 79 AD.
Mhlawumbi ke edume ezimbini yeyona dolophu sePompeii, ngazo ngoku ezula ejikeleza uze uphonononge xa ​​wena kule ndawo. yayi- 3,000 Abantu bafela edolophini, kodwa ash hot immortalized amabhodlo ibe yintoni namhlanje. ukulunyukiswa, oko baxakeke pretty apha, ukuze izicwangciso ngokufanelekileyo kwaye khumbula ukuba kufuneka emgqeni ithikithi ukungena.
Oh, Kwakhona kwidolophu ekufutshane saseHerculaneum incinane yaye yesithili kodwaunemali unika umzekelo wendlela amaRoma atyebileyo ezaziphila. Qinisekisa ukuba atyelele saseHerculaneum Archaeological Area ukuba ngaba buff imbali!
Bari ku Pompei Uqeqesha
10. Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy: Aeolian Islands
Last kuluhlu lwethu Best Iindawo kutyelela eMzantsi Italy. I Aeolian Islands! Bona zaziwa ngokuba Hawaii of Italy. Kuyinto umtya iziqithi ngasentla eSisili, kwaye lobu gorgeous. Njengoko emangalisayo njengoko kusenokuba, akakho umntu uyayazi loo nto. Kodwa abo ntoni esiza emva. Kuba bayazi ukuba baya kuba indawo yonke ngokwabo.
Abaqashileyo ngezithuthuthu ukuba yeTLD_COUNTRY kumanxweme amahle abamnyama. Sunset aperitivo ku Pollara. Ukuhamba ujikeleza kwiziqithi kwayijikeleza mboli, Panarea, no Lipari. Ukufumana Bump kunye Spa ngamanzi sulphur in Vulcano. I vibes Greek (Akumangalisi - iziqithi abizwa ngokuba Aeolus, uthixo oya, jongwa ngabemi Greek). Salt ilutshabalalisile izindlu baphalaza phantsi elunxwemeni. Kwaye uziva ngathi ukuba babukele imfihlelo enkulu ukuba kuphela wanna share nabantu obathandayo!
Insider tip: ukuhamba apha phakathi Ista-Oktobha Book kwangethuba ukuba ufuna ukuya ku Agasti!
Sele ukulungele ukupakisha iibhegi zakho zohambo lwaseMzantsi Italy? Emva koko ncwadi ngololiwe itikiti lakho Gcina A Isitimela phakathi kwemizuzu. Akukho ntlawulo engaphezulu, akukho engaka, kumnandi nje!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Best Iindawo Ukuze Visit In South Italy” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-visit-south-italy%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#italyholiday #SouthItaly #SummerinItaly #TrainTravelItaly ukulenza uhambo ngololiwe